July 2020 - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
ယနေ့လိုင်း ပေါ် မှာ တင်နေတဲ့ သတင်းတွေ ထဲမှာ တရုပ် နဲ့ အမေရိကန်ပြဿနာမှာ မြန်မာပြည်က ကြားညပ်နေတာ ဘာညာနဲ့ တွေ့နေရတယ်.။ ယခု တရုပ်အရေးက မြန်မာကြား ညပ်မယ်ဆိုတာ ကြားညပ်အောင် လုပ်ထားတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တို့နှင့် အပေါင်းအပါတွေရဲ့ တကိုယ်ကောင်းဆန် လောဘ စိတ်တွေကြောင့် ပဲလို့ အရင်ပြောပါရစေ.။ အမေရိကန်နဲ့ တရုပ်ရဲ့အရေးဟာ.
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပထဝီနိုင်ငံရေး(Geopolitics) အရ အရေးပါနေတယ်ဆိုတာ တော့ အတော်များများသိနေတာကြာခဲ့ပါပြီ။ သို့သော်လည်း ကွဲကွဲပြားပြား၊ ထင်ထင် ရှားရှား ပေါ်ထွက်လာတာတော့ အခုလိုအမေရိကန်နဲ့ တရုတ်သံရုံးတို့က သံရုံး Official Page တွေမှာ အတိအလင်းရေးသားထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ အခါကြမှသာ ကွဲကွဲ ပြားပြား၊ ထင်ထင်ရှားရှား သက်သေခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အပြန်အလှန်ပေါ်တင် ရေးသားတိုက်ခိုက်ကြတာတွေဟာ မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုက ဆောင်းပါးရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရေးသားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ အာဒီးကျေးရွာတွင် ဇူလိုင် ၂၃ ရက်၊ နေ့လယ်ပိုင်းက မူးယစ် ဆေးဝါး သတင်းအရ ဝရမ်းဖြင့် သွားရောက်ရှာဖွေရာမှ နေအိမ်အတွင်းဝှက်ထားသည့် လက်နက်များနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများကို အိမ်ရှင်နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သိရသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်က တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ လွယ်တော်ခမ်း ကျေးရွာ အုပ်စု၊
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ လွယ်တော်ခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တာချီလိတ်- မိုင်းဆတ် ကားလမ်း ရွှေတောင်ရွှေနီကုန်းအဆင်းတွင် ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်၊ ၆ နာရီခွဲခန့်က မော်တော်ယာဉ် တစ်စီး ချောက်ထဲကျ တိမ်းမှောက်ခဲ့သဖြင့် တစ် ဦးသေဆုံး၍ တစ်ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တာချီလိတ်မှ မိုင်းဆတ်မြို့သို့ တာချီလိတ်မြို့၊ ရန်အောင်မြေရပ်ကွက်၊ ပါလျှံ(၁) နေ
“ရပ်တန့်လို့မရနိုင်ခဲ့တဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ဘရိတ်အုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။” ဒါကတော့ လိင်ဖျော်ဖြေမှုဗီယိုတွေ ခြိမ်းခြောက်အကျပ်ကိုင်ရယူပြီး အွန်လိုင်းမှာ ခိုးတင်နေတဲ့ အဖွဲတစ်ခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်လို့ သံသယရှိထားတဲ့သူ အဖမ်းခံရပြီးတော့ ပြောခဲ့တဲ့စကားပါ။ ချိုဂျုဘင်ကို “The Doc” ‌ဒေါက်တာလို့ လည်း လူတွေက သိကြပါတယ်။ သူက အသက်၁၆နှစ် အောက်တွေအပါအဝင် အမျိုးသမီးငယ်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို ခြိမ်းခြောက် ဖိုမဆက်ဆံတဲ့
ဆေးရုံတက်တဲ့လူတိုင်းကို ဆေးရုံက ဆရာဝန်တွေက ဆီးအဖြေ သွေးအဖြေ ဘာဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကို သွားစစ်ခိုင်းတယ်။ ဆေးရုံက စစ်ရမယ့်ဟာကို အပြင်ဓါတ်ခွဲခန်းက စာရွက်နဲ့ ဆရာဝန်နာမည်ပါထည့်ပြီး ရေးပေးလိုက်တာ ဘာသဘောလဲ..? အပြင်က ဓါတ်ခွဲခန်းတွေနဲ့ ဆေးရုံကတာဝန်ကျ ဆရာဝန်တွေနဲ့ ဘယ်လိုပါတ်သက်ဆက်နွယ်နေတာလဲ …? ဆေးရုံကဆရာဝန်တွေဆီကို အပြင်ဓါတ်ခွဲခန်းက စာရွက်တွေက ဘာလို့ရောက်နေတာ ဘယ်လိုအချိတ်အဆက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာ ကျမ္မာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရှင်းပြဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။ မရှိလို့ အစိုးရဆေးရုံတက်ပါတယ်
ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် ကိုက်ညီခြင်းမရှိသော ရုပ်ပွားဆင်းတု ၁၀၉ ဆူကို မဟာမုနိ ဘုရားကြီးအနောက်မုခ် ကျောက်ဆစ်တန်းရှိ ကျောက်ဆစ်ဆိုင်နှစ်ဆိုင်တွင် ပြင်ဆင်ရန် အပ်နှံထား စစ်အာဏာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းက ယတြာသဘောဖြင့် ထုလုပ်ကိုးကွယ်ခဲ့သည့် ဘုရားဆင်းတုများကို ဖယ်ရှားရန် သာသနာရေးဦးစီးဌာနက ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးနောက် မန္တလေးမြို့ရှိ ကျောက်ဆစ်တန်းတွင် ပြန်လည်ပြုပြင်လျက်ရှိသည်။ အစိုးရ အဆက်ဆက်အပြောင်းအလဲတွင် အာဏာလက်မလွှတ်လိုသူများ ထုလုပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည့် နေပြည်တော်ပျဉ်းမနားအနီး မင်းဝင်တောင် စိန္တာမုနိကျောင်းတိုက်အတွင်းရှိ
COVID-19 ကူးစက်မှု ဒုတိယလှိုင်း မဖြစ်စေရန် ပြည် သူများ အချက်လေးချက်လိုက် နာရန် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးက သတိ ပေးသည်။ အဆိုပါ အသိပေးပန်ကြား ချက်ကို ဇူလိုင် ၄ ရက်တွင် ထုတ် ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ COVID-19 ကူးစက်မှု ဒုတိ ယလှိုင်းမဖြစ်စေရန် ပြည်သူများ ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် လွန်စွာအ
ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီ အစဉ် (WFP) က စီစဉ်သည့် လူသားချင်းစာနာမှု အထူးလေယာဉ် များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်တုံ့ပြန်ရေး အရေးပေါ်ပစ္စည်းမက်ထရစ်တန် ခြောက်တန်ကျော်ကို သယ်ယူပို့ဆောင် ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ရုံးက ထုတ်ပြန်သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံမှ အပတ်စဉ်‌ပြေးဆွဲ‌နေသည့် လူသားချင်းစာနာ မှု လေကြောင်းခရီးစဉ်သည် ရန်ကုန်မြို့ကို နဝမကြိမ်မြောက် အဖြစ် ယမန်နေ့က ဆိုက်ရောက် ခဲ့သည်။